Feedhka | Martech Zone
Feedhka Iyada Oo
Sabti, Sebtember 29, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Jimcihii, waxaan waqti fiican la qaadannay kooxdii maal-galiyeyaasheena tiknoolajiyadda,Qalabaynta , iyagoo ka wada hadlaya barnaamijyada ganacsiga yar-yar iyo koboca iyo ku-guuleysiga warshadaha. Hal wadahadal ayaa runtii igu dhuftay xadhig aniga oo ila hadlayaQalabaynta magac bixinta
Si aad u siiso waxoogaa asal ah,Qalabaynta markii ugu horaysay waxaa loo bilaabay sidii Formspring. Markii ay kooxdu arkeen sida qalabkoodu caan ugu noqday weydiinta su'aalaha, waxay bilaabeen qalab kaliya taas oo ay ugu magac dareen Carruur, ka dibna dib loogu magac daray qalabkoodii asalka ahaa Qalabaynta. Formspring waxay xaruntooda u wareejisay Silicon Valley iyoQalabaynta ku hadhay Indianapolis.
Saaxiib Cade iyo shirkadiisa, waxaan aaminsanahay inaan xitaa ka dhawaajiyay welwelka aan ka qabo isbedelka iyo sida ay saameyn ugu yeelan karto baaritaanka. Laakiin isbeddelka ayaa la sameeyay,Qalabaynta lahaa a sumad adag oo ay ugu mahad celinayaan kooxda KA + A, iyo mugga cajiibka ah ee isticmaalayaasha Formspring way faraxsanyihiin… sida uu ahaa Formspring oo ku midoobay hogaamiyaasha barnaamijyada warbaahinta bulshada ee Silicon Valley. Xaqiiqdu waxay tahay, in kastoo ay xanuun lahayd, waxa ugu fiican taasQalabaynta waxay ahayd oo kaliya feedhkii buuqa, dhaleeceynta iyo sii wadida u adeegida macaamiishooda.
Ugu dambeyntiina, si fiican ayey u shaqeysay… haddii aysan fiicnayn.Qalabaynta wuu sii kordhayaa wuuna kusii soconayaa si deg deg ah oo hal abuur leh - launching a DropBox is dhexgalka maalmaha soo socda ee qarxin doona koritaankooda!
Anigu aqoon uma lihi wadahadalka gudaha ee ka dhacayQalabaynta waqtigaas, laakiin waxaan hubaa inuu jiray xoogaa jahwareer ah… iyo sidoo kale jirrabaadda in dib looga noqdo go'aanka. Markii aan la shaqeynayay shirkado badan iyo inbadan, in kastoo, waxaan dareemayaa astaamo caan ku ah shirkadaha guuleysta. Iyaga feeray.
Xaqiiqdu waxay tahay in mararka qaarkood dadka badani sax ahayn. Inta badanna, dhaliisha gabi ahaanba waa khaldan yihiin. Bogagga wax lagu qoro, saxafiyiinta iyo dadka kale ee wax naqdiya waa qorayaal badanaana ma laha guul ganacsi oo iyaga u gaar ah si ay ugu qalmaan soo-jeedinta talooyinka ku saabsan sida shirkad ay u shaqeyso. Markii aan bilaabay Highbridge, Waan daawaday oo waan dhagaystay qofwalbana meheraddayduna waxay kudhamaatay si dhakhso ah sidii ay kubilaabantay.
Ma ahayn ilaa aan bilaabay inaan la hadlo dadka haysta raad raaca ee kobcinta ganacsiyada guuleysta waxaan bilaabay inaan raadsado aragtideyda gaarka ah ee waxa ganacsigeygu noqonayo in ganacsigeygu noqday mid guuleysta. Kulamadii Chris Baggott, Kristian Andersen, Matt Nettleton, Harry Howe, David Castor, Todd Boyman, Adam Small, Doug Theis iyo Michael Cloran waxay i siiyeen dhiirrigelin aan ku fekero. Ganacsigeygii si weyn ayaan u beddelay, waxaan ku waayey saaxiib wanaagsan, waxaanan dhagaystay gunuusyada ka jira gobolka oo saadaalinaya dhimashadayda.
Laakiin waan feeray.
Highbridge iyada oo ganacsi rasmi ah uu dhaafey 2 sano hadana waxaan hada heysanaa 6 shaqaale waqti-buuxa ah iyo macaamiil aad u tiro badan. Waxaan hada saxeexnay Roche caalami ahaan, waxaan dhameystirnay mashruucii ugu horeeyay ee nooga socda VMware, waxaanan leenahay macaamiil aan caadi aheyn oo daacad u ah sida Angie's List, Zmags, Mindjet, TinderBox, Delivra, Right On Interactive and more. Waxaan haynaa macaamiil kale oo soo laabtay kadib hirgelintii lagu guuleystay… sida ChaCha, Webtrends, iyo VA Loan Captain.
Kooxdayadu way yartahay wayna kaladuwan tahay, laakiin waxaan nahay kuwa kacsan oo dhamaanteen waxaan ku faraxsanahay helitaanka natiijooyinka. Jenn waa qayb muhiim ah oo ka mid ah kooxdeena wax walbana dhaqaajisa, Stephen wuxuu soo jiidayaa habeenada oo dhan iyo mucjisooyinka, Marty waa ceel daahfurka iyo caqabadaha macaamiisheenna, Nikhil wuxuu leeyahay feejignaan aan caadi aheyn oo faahfaahsan, iyo Nathan waa naqshadeeye xiddig weyn magac ka noqo warshadaha maalin maalmaha ka mid ah. Dhamaan kooxdeena waxay wadaagaan hal shay - waan feeraynaa. Ma dhagaysanayno kuwa noo sheegaya, waxaan qorshaynaynaa wadadeena. Hay'addeenu ma aha mid kale oo xitaa waxay wareerisaa qaar ka mid ah macaamiisheenna maaddaama aysan waligood la shaqeyn shirkad sidayada oo kale ah.
Jooji dhageysiga dadka badan oo dhagri wadadaada. Dadku waxay kuu sheegi doonaan inaadan sameyn karin waxyaabo aad awoodid. Jawaab celinta macmiilka ee ku saabsan alaabada iyo adeegyada waxay caawineysaa macmiilka… laakiin waxaa laga yaabaa inaysan danta shirkaddaada ugu jirin. Macaamiisha qaar waxay dhaawici doonaan shirkaddaada waxaadna u baahan tahay inaad barato sida looga takhaluso. Dadka badankood waxay doortaan wadada aaminka ah, ma doortaan wadada halista badan.
warbaahinta bulshada waxaa laga yaabaa inuu yahay saamaynta ugu xun abid ee shirkadaha… dadku ma ahan caqli gebi ahaanba, fikirka kooxdu waa celcelis - marka laga reebo. Haddii aad rabto inaad guuleysato, waa inaad joojisaa raacitaanka waana inaad bilowdaa hoggaaminta.
B2B Caalamka Suuqgeynta Bulshada
Tixraac: Fudud, Taageerada Macaamiisha SaaS oo aan qaali ahayn
Sep 29, 2012 at 4: 34 PM
Waad ku mahadsantahay wadaagida Doug-kan. Runtii way ila muuqataa waana cashar weyn iyadoon loo eegin baaxadda shirkadda aad u shaqayso. Waxaan kuugu hambalyaynayaa laba sano guuradii sidoo kale!
Sep 29, 2012 at 4: 40 PM
Mahadsanid @jaschakaykaswolff: disqus! Shaki kuma jiro in dib: ganacsiga iyo suuqgeyntu hada isbadal kusameyso Mindjet ay marayso - Shaki igagama jiro adiga hogaaminta aad feejignaan doontid waxaanuna sii wadaynaa cadaadiska aan kala joogsiga lahayn ee kaa caawinaya inaad sameyso. Sidoo kale, waad ku mahadsan tahay noqoshada noocan oo kale ah iyo lamaanaha daacadda ah. Waxaad naga caawisay inaad nagu riixdo jihooyinka aan ubaahanahay inaan aadno waxayna qeyb weyn ka ahaayeen kobacayaga sii socda iyo guusha.
Sep 30, 2012 at 12: 12 PM
Doug, waad ku mahadsan tahay inaad na sii haysatid waadna ku mahadsan tahay boostada la socota. Waxaan kuu xaqiijin karaa inay jireen xoogaa "kacdo" beryahaas. Waa wax la yaab leh sida haysashada barnaamij adag, macaamiil cabsi leh, iyo hoggaan weyn, ay kaaga caawin karaan inaad hesho xoog aad ku riixdo. Waan ku raaxeystay daawashada adiga oo koraya DK New Media oo aanad waligaa ka shakin waxyaalaha aad qaban karto. Waxaad tahay hal nin kaligiis burburin kara shaqaalaha markanna hada oo aad leedahay koox waxbadan kama rajeynayo laakiin waxa kuugufiican adiga. Waxaan kugu bogaadinayaa inaad riixdo oo aad kobciso meheraddaada.